အဘယ်ကြောင့်သင်ကပွငျသစျထဲတွင်မှား "မေတ္တာအတွက် Fall ရန်" ဟုဖွင့်
"Tomber en Amour" "မေတ္တာတော်၌တည် Fall" ဟုပြောပါရန်မှန်ကန်သောလမ်းစဉ်မဟုတ်
tomber en Amour တကယ်ပွငျသစျထဲတွင် "မေတ္တာ၌ကရြောကျရန်" ကိုဆိုလိုသလဲ ကျနော်တို့ပကတိဘာသာပြန်ချက်သုံးလျှင်, ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ပါဘူး။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပြောသင့်လျော်သောလမ်း tomber amoureux ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြင်သစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအောင်နှင့်ကအတော်လေးမှန်ကန်မယ့်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်သောသူတို့ကိုဘုံအမှားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် "မေတ္တာအတွက် Fall စေရန်" Amour en Tomber မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်
French သို့ဘုံအင်္ဂလိပ်စာပိုဒ်တိုများဘာသာပြန်ဆိုအချိန်များတွင်လှည်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ချက်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်အရာကိုတဦးတည်းဘာသာစကားမှာနားလည်အခြားတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ်ပာယျနိုငျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့ရှိနေရာအရပ်ဖြစ်၏ "မေတ္တာ၌လဲ။ "
ညာဘက်: Tomber amoureux
မှားယွင်းနေ: Tomber en Amour
အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်သနည်း Amour en Tomber ၏ပကတိဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ် "မေတ္တာ၌လဲ။ " Tomber "လဲကျဖို့" ကိုဆိုလိုသည် နှင့် Amour ကိုဆိုလိုသည် "မေတ္တာ။ " အားလုံးယုတ္တိသဘောအရဤမှန်ကန်သောညာဘက်ပါသလဲ
ဒါမှမဟုတ်မြေ၌အပေါက်တစ်ပေါက် - - အင်္ဂလိပ်စကားရပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးရေအိုင်များကဲ့သို့သံကိုမှန်ကန်စေသည်လူတွေထဲသို့ပြုတ်ကျထဲကနိုင်ပါသည်။ သငျသညျထက် 'မေတ္တာလဲကြ "ဒါပြင်သစ်, သို့သော်, ချစ်ခြင်း, ဖြစ်ခြင်း၏တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်" မေတ္တာ၌တည်၏။ "
je suis သင်္ချိုင်း amoureux က de ဖရန်ကွိုက်စ!
သင်သည်ထိုဝါကျအတွက် amoureux က de ၏အသုံးပြုမှုကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ရနေရာအရပ်ဖြစ်၏ "နဲ့မေတ္တာ၌တည်၏။ " Amoureux "မေတ္တာမှာ" ဖော်ပြသောနာမဝိသေသနဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် "မေတ္တာရှင်" နှင့်က de ဆိုလို "နဲ့။ "
ဤတွင်အတိတ်တင်းမာနေအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ tomber နှင့် amoureux နှစ်ဦးစလုံးဟာတင်းမာနေနှင့်ဘာသာရပ်နှင့်အတူဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာသတိပြုမိပါစေနဲ့။
သူတို့ကဒီပြီးသားဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုကို back up ။
Elle est tombée amoureuse က de Jacques ။
သူမသည် Jacques နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။
"မေတ္တာ" ၏သင့်ရဲ့ပြင်သစ်အသုံးပြုမှု Expand
ဒါဟာပြင်သစ်စျြခွငျးမတ်ေတာ၏ဘာသာစကားကိုသည်နှင့်, အကယ်စင်စစ်, တကအချစ်ဇာတ်လမ်းဘာသာစကားကဆိုသည်ရဲ့။ သငျသညျအနညျးငယျ Amour များအတွက်စိတ်ဓါတ်များနေစဉ်တွင်, သင်နှင့်သင်၏သင်ယူလေ့လာစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ပွငျသစျထဲတွင် "မေတ္တာ" ဟူသောအသုံးအနှုနျး ။
ကြောင်းအတွင်းမှာပဲအပေါ်ကိုတက်တိုက်ရန်သေချာစေပါ စနစ်တကျ "ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်" ဟုပြောဖို့ဘယ်လို အဖြစ်ကောင်းစွာ။
ဂျာမန်ကြိယာ conjugation: (Do ရန်) ထွန်း
နေ့၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို - wagamama
ကို Creative နှစ်သစ်ကူးဂြာမနျတွင်ဆန္ဒရှိသော်လည်း
Reserve - ဘေးမဲ့တောမှ
"ရှိ" နှင့်အီတလီမှာ "အဲဒီမှာရှိပါသလား" ဟုပြောပါဖို့ကိုဘယ်လို
စပိန်ကြိယာ '' ဖုံးကိုဓားရှည် 'နဲ့' Conocer '' အကြားခြားနားချက်ကိုသိပါ
ပြင်သစ်ကြိယာ '' အဆင့်သတ်မှတ်သူ '' ( 'အလှမယ်ရန်, ကျရှုံးခြင်း') Conjugate လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ဂေါက် Swing အတွက်လက်ကျန်ငွေနှင့် Rhythm Improve ကိုကူညီပါ3တူးဖော်ရေး
မြို့ပြခငြ့်အရေး, Romance နှင့်အားလပ်ရက်များအကြောင်းရုပ်ရှင်ရုံများတွင်အရောင်များ၏ပြည်သူ့
အထွေထွေ Dwight D. ချို၏စစ်ရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
အကြှနျုပျ၏ PHP ကို ​​'s Page အားလုံးအဖြူရောင်တင်ခဲ့သည်။ ငါမှားအဘယ်အရာကိုလုပ်ပါသလား?
အမေရိကန်ခြင်္သေ့ (Panthera လီယို Atrox)
အဆိုတော်များများအတွက်ထိပ်တန်း 100+ ပန်းချီသိကောင်းစရာများ
ခရစ္စမတ်သစ်ပင် Worm များ၏ဘဝနှင့် Times သတင်းစာအကြောင်းလေ့လာပါ
2012 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 အမှတ်ရဖွယ်လုပ်ငန်းပေါ့ပ်သီချင်း Lyrics
နယူး Rochelle အဆင့်လက်ခံရေး၏ကောလိပ်
အိုင်အိုဝါ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်